» यात्रामा भेटिएको मेरो साथी
८ भाद्र २०७७, सोमबार १८:१७
मकवानपुर । फागु्नको महिना, हाम्रो कलेजको टुर थियो । टुरको पहिलो दिन धरान थियो । हामी त्यहाँ धरानमा भएको हाम्रो कलेज घुम्न गयौं । कलेजसंगै रहेको बुढासुब्बा मन्दिर नपसी त्यसै छोडेर फकिने कुरा पनि भएन । मन्दिर पसेर दर्शन गयौं । मन्दिरबाट फर्कर्ने क्रममा बाटोमा मैले मेरो साथीलाई भेटे । उ सग मेरो कुराकानी त पहिलै नै भएको थियो तर भेट भने हुन सकेको थिएन ।
हाम्रो पहिलो भेट थियो त्यो । बाटो छेउमा रहेको चिया पसलमा पस्यौं हामी । पहिलो भेट मनमा अनेक प्रश्नहरु त थिए नै । प्रश्नसंगै अनौठो महशुस पनि थियो । लगभग दुई घन्टा जति कुराकानी गरेपछि हामी त्यहाबाट अरु साथिहरु भएको ठाँउमा गयौं ।
साथिहरुसंगै म आफ्नो होटेलतर्फ लागे । होटलतर्फ जादैं गर्दा मनमा अनेक कुराहरु खेल्न थाले । लाग्यो त्यस ठाउँमा मेरो केहि समान छुटे झै महशुस भइरहेको थियो । खै किन हो त्यहाबाट जानु पर्दा अनौठो लागिरहेको थियो । नयाँ ठाउँ अनि लामो समय पछिको भेट मन चञ्चल भइनै रहेको थियो । यस्तै कुरा मनमा खेलाउदै होटल पुगेको पत्तो भएन मलाई ।
भोलिपल्ट हामी धरान छोडेर जानु पर्ने थियो । मन नहुदाँ नहुँदै बाध्यता पनि थियो । समयको कसैलाई पर्खिदैन भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दै थिए म । विहान आफ्नो दैनिक काम सकेर धरान छोड्न सबै साथिहरुसंग गाडी चढें । गाडीभरी उसैको सम्झना आइरहेको थियो ।
त्यो नयाँ ठाउँ अनि उ संगको भेट निकै छोटो लाग्दै थियो मलाई । हैर भेट छोटो भए पनि सम्झना सारै मिठो थियो । साथिहरुको मुखबाट उसको नाम सुन्दा पनि मख्ख पर्ने भएकी थिए म ।
गन्तब्य इलाम बोकेर यात्रा चलिरहेको थियो हाम्रो । धरानबाट इटहरी, बिर्तामोड, चारआलि हुँदै हामी हाम्रो गन्तब्य इलाम पुगैं । त्यो दिनको बासको ब्यवःथा इलामनै गरेका थियौं । इलामको चिसो मौसम अनि सन्दर चियाबगान मनै लोभ्याउने दृष्य लाग्यो पुरा जीवन यहि विताइदिऊ । इलाम घुमेर अर्को दिन हामी अर्को ठाउँ जाने तयारीमा थियौं ।
बिहानको खाजा खाादै गर्दा मेरो मोबाईलमा घण्टी बज्यो । नयाँ नम्बर रहेछ । नचिनेको नम्बर भएर, को होला ? घरबाट त पकै हैन भन्ने मनमा लाग्यो । यी सब कुरा सोच्दै फोन उठाए ।
उताबाट आवाज आयो पहिलो शब्द चिन्यौ ? सुन्दा अचम्म लाग्यो तर मनमा उत्सुक्ता अनि मुहरमा मुस्कान । उहि रहेछ । जसलाई हरेक समय सम्झिरहेको थिए । त्यस दिन केहि समय कुरा गरेर फोन राखे । त्यस दिन देखि हाम्रो कुराकानी दिनदिनै हुन थाल्यो । दैनिक यसरी नै चलीरहेको थियो हाम्रो सम्बन्ध । कुनै दिन उसको मेसेज नआउदा रातभर अनीदो नै बस्ने बानी परेको थियो मलाई । फोन, मेसेज नआउदा रातभर जागा बस्ने म झन जिन्दगीमा नहुदा कति फरक पर्छ होला कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन थिए ।
त्यसरी नै हाम्रो १० दिनको भ्रमण सकेर म घर फर्किए । दैनिकी पहिले जसरी चलिरहेको थियो । उसको फोन मेसेजको पर्खाईले लाग्थ्यो उसको र मेरो सोचाइमा धेरै फरक छ । कहिले काहि त रीस उठ्थ्यो । कुरा नमिल्दा रिस नि उठ्थ्यो । कहिले मुस्कान भन्दा विशेष हुन्छ रिस किनकी मुस्कान सबैको लागि हुन्छ रिस उसको लागि हुन्छ जसलाई गुमाउने डर हुन्छ । मलाई पनि उस्तै भएको थियो उसलाई गुमाउन चाहाना थिएन मलाई ।
भेट्दा ओए भन्ने भन्दा नभेटदा खोइ भन्ने साथि धेरै खास हुन्छ रे । हाम्रो सम्बन्ध नि त्यस्तै थियो । एकचोटीको छोटो भेटले हाम्रो सम्बन्धलाई गाढा बनाइ दिएको थियो ।
समयसंगै मेरो जिन्दगीमा धेरै उतार चढाव आए । कुनै त्यस्तो समय थियो म पुरै भित्रबाट नै टुक्रिएको थिए । त्यतिबेला मलाई सम्हाल्ने कोहि थिएनन् । भन्छन नि जो साथी दुखमा नि साथ दिन्छ त्यही असल साथी हो भनेर । त्यो बेला देखि बाबाआमा पछीको बिश्वास गर्न सक्ने भनेको मेरो उहि साथी थियो ।
हरेक दिन उसको फोन र मेसेजको पर्खाइ नै मेरो दिनचर्या बनेको थियो । लाग्थ्यो आज त फोन आउँछ । हरेक दिन कुर्नुको विकल्प थिएन मसंग ।
समय बित्दै गयो । न उसको फोन आयो न मेसेज । केही समय पछी मेरो साथी म बाट टाढा हुँदै गएको महसुस गर्न थाले । उसंग पहिलाको जस्तो कुराकानी पनि हुन छाडिसकेको थियो । मलाई उसंग दुुरी बनाएर बस्नु थिएन । उ मबाट टाढा गएको मलाई पटकै मन परेको थिएन । अनेक प्रश्नहरुको जंजालमा घेरीएको थिए म । यो सबै देखेर मलाई मन–मनै गाहे अनुभव लाग्न थालिसकेको थियो ।
सबैलाई भुलेर मैले उसैलाई मात्र सम्जिदा उसले मलाई भुलेर अरुलाइ सम्झदै थिए म । बेला–बेलामा उसले भने गथ्र्याे मलाई बुझ्न गाह्रो छ भनेर । तर मैले सोच्थे राम्रो मान्छे र राम्रो किताबलाइ बुज्न टाईम लाग्छ भनेर । त्यो दिन देखि लाग्न लाग्यो उसलाई बुज्न साँचै गाहे रहेछ ।
त्यो बेला म भित्रैबाट टुटिसकेको थिए । आमाबाबाको अगाडि अफुलाई बाहिरबाट जति हासी खुशी देखाउन खोजे नि म भित्रबाट खुशी थिइन । मलाई एकान्त मन पर्न थालेको थियो । हरेक समयमा म एक्लै बस्ने बानी नै लागिसकेको थियो मलाई ।
त्येति बेला उसले मलाई उसको महत्व बुझायो । उ नहँुदा म कति अधुरो छु भन्ने आभाष त्यस केला भएको थियो । यी घटनाहरुले मलाई धेरै कुरा सिकायो । उसले एक असल साथि कस्तो हो भन्ने सिकायो । साथीहरुको आत्मियता उसैले सिकाएको थियो । केहि गर्नु पर्छ भनेर सिकायो । हरेका पाइलामा एउटा नयाा पाठ सिकायो । सिधा–सिधा भन्ने हो भने उसले मलाई जिवनको महत्व सिकायो ।
उसले मसंग जे कारणले बोल्न छोडेको थियो त्यसको मलाई कुनै पनि रिस छैन । उसको मिठो त्यो यादहरु र उसलाई मैले गरेको सम्मान र माया सधै भरि हुनेछ ।
लेखकः मञ्जु क्षेत्री (नेशनल कलेज अफ फुड साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीमा खाद्य प्रविधि विषयमा स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरतमा छिन् ।)
मकवानपुर पार्टी कार्यालयमा आजबाट एमालेको बोर्ड
मकवानपुर प्रहरीले हराएका २२ वटा मोबाईल फेला पार्यो
दुर्घटनामा परेको बाईकबाट लागू औषध बरामद, चालक फरार
क्रियाशील महिला पत्रकारको अन्तरक्रिया सम्पन्न
हेटौंडानै नदेखेका ५ जनासहित एकैदिन राक्सिराङका ६० जनाले लिए नागरिकता
हेटौंडामा लोकसेवा दिन आएकाको हराएको बाईक भेटियो